टेस्ट, क्विज र असाइनमेन्ट स्कोर गणना गर्न ग्रेड क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न सजिलो। यो नि: शुल्क उपकरण शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूको लागि ग्रेड सजिलै गणना गर्नका लागि डिजाइन गरिएको हो।
गलत उत्तरहरूको संख्या
द्रुत चार्ट ग्रेड चार्ट
उत्तर पाना सिर्जना गर्नुहोस् उत्तर पाना स्क्यान गर्नुहोस्
Aspose.OMR ग्रेड क्याल्कुलेटर कुनै पनि उपकरण र प्लेटफर्मबाट क्विज, परीक्षण र असाइनमेन्ट स्कोर सजिलै गणना गर्न एक नि: शुल्क अनलाइन अनुप्रयोग हो। विस्तृत स्कोर जानकारी प्राप्त गर्न प्रश्नहरूको कूल संख्या र गलत उत्तरहरूको संख्या प्रविष्ट गर्नुहोस्। यस ग्रेडि tool उपकरणले दुई ग्रेडिंग प्रणालीहरू समर्थन गर्दछ: मानक points पोइन्ट र १२ पोइन्ट +/- अंकको साथ विस्तारित। ग्रेड वितरणको द्रुत सन्दर्भको लागि ग्रेडिंग चार्ट प्रयोग गर्नुहोस्।
सबै गणनाहरू अमेरिकी स्कूलहरू र विश्वविद्यालयहरूमा मानक ग्रेडिंग प्रणालीमा आधारित छन्। तपाई points पोइन्ट र १२ पोइन्ट प्रणाली बिच क्याल्कुलेटर माथि अवस्थित बटन प्रयोग गरी स्विच गर्न सक्नुहुनेछ। एस्पोज ग्रेड क्यालकुलेटरले दुई चार्टहरू पनि प्रदान गर्दछ: प्रत्येक ग्रेडको लागि गलत र सहि उत्तरहरूको बारेमा जानकारीको साथ द्रुत चार्ट, र गलत उत्तरहरूको सबै केसहरूको लागि ग्रेडको सूचीको साथ ग्रेड चार्ट।
टेस्ट ग्रेडहरू गणना कसरी गर्ने
Es कसरी ग्रेड गणना गर्न?
तपाईंको परीक्षणमा कुल प्रश्नहरूको संख्या र ग्रेड हेर्न गलत उत्तरहरूको संख्या प्रविष्ट गर्नुहोस्। विस्तृत जानकारी हेर्न चार्टहरू जाँच गर्नुहोस्।
कुन ग्रेडिंग स्केल गणनामा प्रयोग भएको छ?
I के म लिनक्स, म्याक ओएस वा एन्ड्रोइडमा ग्रेड गणना गर्न सक्छु?
ग्रेड क्यालकुलेटर अनलाइन काम गर्दछ र कुनै सफ्टवेयर स्थापनाको आवश्यक पर्दैन।
द्रुत र इजी ग्रेड क्यालकुलेटर
ग्रेड क्यालकुलेटर गुणवत्ता